Nyochaa: Rakefet Abergel's ‘Boo’ bụ ihe nkiri na-atọ ụtọ, gbagọrọ agbagọ
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Nyocha: Rakefet Abergel 'Boo' bụ ihe nkiri na-atọ ụtọ, gbagọrọ agbagọ
Nyocha: Rakefet Abergel 'Boo' bụ ihe nkiri na-atọ ụtọ, gbagọrọ agbagọ
edere ya Waylon Jordan November 8, 2019
Ọdụ, Ihe nkiri egwu dị mkpirikpi ọhụụ na-eme ugbu a gafere mba ahụ n'okporo ụzọ gbagọrọ agbagọ nke usoro ihe nkiri ihe nkiri ahụ, na-akụda akara aka nri, aka ekpe, na etiti na maka ezigbo ihe kpatara ya.
Edere, duzie ya, ma tinye ya Rakefet Abergel, ihe nkiri a na-akọ akụkọ banyere Devi, nwa agbọghọ bụ onye na-agbake ọgwụ riri ahụ bụ onye hụrụ onwe ya n'ọnọdụ na-agaghị ekwe omume n'otu oge mgbe ọhụhụ na-egbu mmanya na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala mgbe nzukọ AA gasịrị.
Ihe nkiri a na-aga n'ihu na azụ dị ka enyi nwoke Devi Jared (Josh Kelly, Etiti abalị, Texas) rutere iji bulie ya naanị iji chọpụta ihe na-enweghị ike ịkasi ya na ọbara. Ọ na-agbasi mbọ ike ijikọ onwe ya mgbe Jared na-ajụ ya ajụjụ banyere ihe merenụ.
N'elu ala, enwere ike ịgụ nke a dị ka ihe nkiri egwu dị mfe nke nwere echiche ziri ezi, mana dị ka obere ihe nkiri Abergel ikpeazụ Jax na .hụnanya, ọ bụ ihe na-eme n’okpuru elu nke kachasị adọrọ mmasị Ọdụ.
Abergel, dika Stephen King mere The mbadamba na-egbuke, na-achịkwa ịkọ akụkọ banyere ahụ riri ahụ na mmetụta ya, ọ bụghị naanị maka onye ahụ riri ahụ kamakwa maka ndị gbara ha gburugburu. Mgbe Devi na-apụ "n'ụgbọala ahụ" n'agbanyeghị na o yiri ka a manyere ya, ya na ndị niile gbara ya gburugburu na-akwụ ụgwọ ahụ.
“Paysnye na-akwụkwu ụgwọ” bụ otu n’ime ajụjụ ndị ị ga-echebara echiche mgbe ogologo oge gachara.
Abergel na Kelly na-enye ọmarịcha arụmọrụ na fim ahụ dịka Michael Villar (Ebe a na-adọba anụ) dị ka onye na-awakpo Devi. N'ezie, Ọdụ na-etu ọnụ nke onyinye gụnyere Parisa Fitz-Henley (Etiti abalị, Texas), Uwe OjukwuNa-enweghị obi ụtọ) na Brigitte Graham (Misfire).
Nke a bụ oge mbụ Abergel na-eduzi ihe nkiri dị ka nke a, ọ bụ ezie na oge ụfọdụ na ihuenyo nwere ike ime ka ọ sikwuo ike ntakịrị, ọ bụ mmalite mmalite nke ga-eme ka anyị lelee ihe ọ ga-eme.
Ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ka ị gharakwa ịhụ Alex U. Griffin (Amaterasu), Onye na-ese ihe nkiri Abergel. Ọ rụrụ ọrụ magburu onwe ya nke iweghara obere oge na ịkụnye ha ihe egwu na-eme ụwa Ọdụ yiri ka ọ dị adị karịa ma dịkwa njọ.
Iji soro ihe kachasị ọhụrụ Ọdụ ozi ọma, nye ha soro na ha ukara Facebook page, ma lee ihe nkiri ahụ na ememme dị gị nso.
ỌdụJosh KellyParis Fitz-HenleyRakefet Abergelobere ihe nkiriWaylon Jordan
Usoro 'Eli Roth nke Horror' meghariri maka oge nke abụọ
Hulu na-ekwuputa oge mbu maka usoro 'Monsterland' Anthology